ट्याग: ईमेल मार्केटिंग रोई | Martech Zone
ट्याग: ईमेल मार्केटिंग रोई
ईमेल न्यूजलेटरहरू किन प्रभावकारी छन्?
बिहीबार, डिसेम्बर 6, 2012 मङ्गलबार, डिसेम्बर 4, 2012 Douglas Karr
मैले हालसालै मेरो अनलाइन मार्केटिंग चेकलिस्ट पोष्ट गरें र रणनीतिहरूमध्ये एउटा जुन उच्च प्राथमिकता ईमेल मार्केटिंग हो। ईमेल मार्केटि अझै पनि लगानी मा धेरै उच्च फिर्ताको छ, प्रवेश को कम लागत, र आफ्नो वर्तमान ग्राहकहरु पुग्न मार्केटर्स को लागी बाँकी केहि पुश टेक्नोलोजी मध्ये एक हो। ईमेल मार्केटिंग कार्य गर्दछ - हामी सबैलाई थाँहा छ कि तर तपाईंको ईमेल न्यूजलेटर तपाईंको संस्थाको लागि कत्तिको मूल्यवान छ? के तपाइँ बुझ्नुहुन्छ?
संसाधन बनाम संसाधन
बिहीवार, जनवरी 1, 2009 सोमबार, जनवरी 1, 2018 Douglas Karr
म TED मा टोनी रबिन्स को एक भिडियो भर मा भयो जुन धेरै प्रेरणादायक थियो। उनको एक लाइन वास्तवमा मसँग व्यक्तिगत रूपमा साँचो थियोः संसाधन बनाम संसाधनहरू मसँग अहिलेसम्म रहेको सबैभन्दा बढी काम गर्ने एउटा भनेको एक्स्ट्याक्टरेटका लागि एकीकरण परामर्शदाता थियो। त्यतिखेर एक्स्ट्याक्ट्रेटसँग पर्याप्त सीमित अनुप्रयोग प्रोग्रामिंग इन्टरफेस (एपीआई) थियो तर हाम्रो ग्राहक परिष्कार र स्वचालनमा बढ्दै थियो। हरेक दिन एक ग्राहकको साथ एक मिटिंग थियो जससँग एक थियो